ဝယ်လက်မှတ် YHT | မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်တွေ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဝယ်လက်မှတ် YHT | high-speed ရထားလက်မှတ်တွေ
30 / 08 / 2019 Levent Ozen 06 တူရကီ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား 1
ဝယ်လက်မှတ် YHT | သငျသညျကိုအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်တွေအကြောင်းကိုဤသတင်းကိုစုဝေးစေကြပါပြီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရှာပါ။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 25 TL
အသက် 12 နှစ်ပေါင်း 12.5 TL
အသက်7နှစ်ပေါင်းသူ့မိသားစု ticketless စီးနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကစျေးနှုန်းများကိုအခန်း 35 ve 17.5 TL ။
အစာရှောင်ခြင်းရထားကြိုတင်မှာဖုန်းဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်က e-စာအုပ်ထင်လျှင်, သင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ပုံစံ screen ကိုဖြည့်ဖို့ entry ကို TCDD-အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းရထား Subscription ကတ်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်
YHT Card ကိုအပြည့်အဝကတ် (Eskisehir နှင့် Konya) £ 385,00,
Young က YHT Card ကို £ 275,00,
တူရကီ Sincan £ 155,00,
Young က YHT £ 130,00,
EskişehirPolatlı £ 180,00,
Young က YHT £ 150,00
high-speed ရထားဖုန်းကို 444 82 33 သငျသညျကုဒ်သို့မဟုတ်မြို့သုညရေးသားခြင်းမရှိဘဲမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အတူတမြို့လုံးများ၏ရှေ့မှောက်၌ရ။
အစာရှောင်ခြင်းရထား Reservation များ
button ကိုကလစ်နှိပ် "ဝင်မည်" ဝင်လာသောမျက်နှာပြင်,
"အင်တာနက်ကိုဝင်မည်မျက်နှာပြင်" မှ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါထို့နောက် "ထည့်သွင်းမှု" မှသင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ
စေမှာယူရာမှ drop-down button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
incoming ဘူတာဘော်ဒါဆောင်ရထားမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ Menu ကိုရွေးချယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, သမိုင်း, ရထား, destination သည်ဘူတာရုံကို select, ခရီးသည်အရေအတွက်ကရိုက်ထည့်ပါနှင့်ခလုတ် NEXT ကိုနှိပ်ပါ။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမာစတာမဟာဗျူဟာနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာဝန်ကြီးဌာန: ဒီနေ့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကနေ 400-600 ကီလိုမီတာအထိရောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဦးစားပေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒ၏အဓိက Modes သာဖြစ်နှင့်မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်များ၏အနာဂတ်မှားမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
587 8-9 ကီလိုမီတာရှည်လျားသောလမ်းခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်နာရီခန့်ကြာနှင့် ပတ်သက်. တူရကီİzmirအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စုစုပေါင်းခရီးသွားအချိန်နှင့်325 နာရီမိနစ်ဝန်းကျင်၏ standby အချိန်သည်အပါအဝင်တူရကီနှင့် Izmir လေဆိပ်လုပ်ငန်းများအကြားလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
တူရကီ, Izmir, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြုပြင်တိုင်းပြည်၏အရေးအပါဆုံးမြို့ကြီးများအကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ ဤရွေ့ကားလိုအပ်ချက်များကိုတက် လာ. တူရကီ Izmir YHT စီမံကိန်းကနေရွှေ့။
ဤစီမံကိန်းများတွင်တူရကီ, Afyon ရောက်ရှိ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းရဲ့ xnumx'nc, Afyon Uşakထံမှအသစ်သောမီးရထားလိုင်း၏ကီလိုမီတာအတွင်းရှိ Yenice ၏ရွာကနေစတင်နှင့် Menemen Manisa ၏အလယ်ဗဟိုမှတဆင့်ရောက်ရှိလက်ရှိလိုင်းတိုးတက်မှုမျှော်မှန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းပါဝင်ပါသည်။
ဘိန်းဘုရင် The Opium နာရီအတွင်းဤစီမံကိန်းကနေ 1 20 မိနစ်တူရကီမှ Izmir ထံမှတူရကီနှင့် Izmir Afyon2နာရီအမှု၌အသက်တာကိုမှလာ 30 မိနစ်အပါအဝင်350 မိနစ်, နာရီ, ၏ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်စီစဉ်ထားသည်။
2011 တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုစီမံကိန်းများအတွက်တင်ဒါPolatlı-Afyon သတ်ခြင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လမ်းစီမံကိန်း၏အကွာအဝေးနှင့်ကြာချိန်အဆိုအရ:
တူရကီ, Izmir (ထွက် Manisa): 663 ကီလိုမီတာ
တူရကီ, (Gulab ထဲက) Izmir: 624 ကီလိုမီတာ
တူရကီ, Izmir (ထွက် Manisa):350 နာရီမိနစ်
တူရကီ, Izmir (Gulab ထဲက):320 နာရီမိနစ်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 2019 လက်ရှိစျေးနှုန်းစာရင်း (YHT)
အစ္စတန်ဘူလ် YHT Eskisehir 2019 အပေးအယူများ
အစ္စတန်ဘူလ် Eskisehir အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (2 40 နာရီမိနစ်)
စံလက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 46,00
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 55,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (စံ) £ 67,00
စီးပွားရေးဖိုရမ် (Flexible) £ 80,50
အစ္စတန်ဘူလ် Konya YHT 2019 အပေးအယူများ
အစ္စတန်ဘူလ် Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (4 20 နာရီမိနစ်)
စံလက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 86,00
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 103,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (စံ) £ 125,00
စီးပွားရေးဖိုရမ် (Flexible) £ 150,00
တူရကီ YHT 2019 အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်မှအစ္စတန်ဘူလ်
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (4 20 နာရီမိနစ်)
စံလက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 71,00
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 85,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (စံ) £ 103,00
စီးပွားရေးဖိုရမ် (Flexible) £ 124,00
တူရကီ, Konya YHT 2019 အပေးအယူများ
တူရကီ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (1 55 နာရီမိနစ်)
စံလက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 31,00
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 37,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (စံ) £ 45,00
စီးပွားရေးဖိုရမ် (Flexible) £ 54,00
တူရကီ Eskisehir YHT 2019 အပေးအယူများ
တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (1 36 နာရီမိနစ်)
Konya, Eskisehir YHT 2019 အပေးအယူများ
Eskişehir Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန် (1 45 နာရီမိနစ်)
စံလက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 39,50
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်မှတ် (Pulman နှင့်ညစာစားပွဲ) £ 47,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (စံ) £ 57,50
စီးပွားရေးဖိုရမ် (Flexible) £ 69,00
လက်ရှိလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုသင်ယူလက်မှတ်တွေရဖို့ YHT ဒီမှာ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİRအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူအကြား မြန်နှုန်းမြင့်သင်တန်းနှင့်အလုပ်၏နာရီပေါ်မှာနေ့တိုင်း Departure နာရီကနေ ESKISEHIR:
Eskisehir ငွေကျပ်: 08.00 - Konya V ကို: 10.00
Eskisehir ငွေကျပ်: 16.00 - Konya V ကို: 18.00
Departure နာရီကနေ Konya YHT:
Konya ငွေကျပ်: 09.35 - Eskisehir V ကို: 11.35
Konya ငွေကျပ်: 18.55 - Eskisehir V ကို: 20.55
တူရကီငွေကျပ်: 07.00 Konya V ကို: 08.52 (Sincan က F: 07.21 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး)
တူရကီငွေကျပ်: 09.35 Konya V ကို: 11.30 (Sincan က F: Sincan က F 09.56: 10.17)
တူရကီငွေကျပ်: 11.20 Konya V ကို: 13.10 (ကျန်း-Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး။ )
တူရကီငွေကျပ်: 13.00 Konya V ကို: 14.52 (Sincan က F: 13.21 Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး။ )
တူရကီငွေကျပ်: 15.30 Konya V ကို: 17.22 (Sincan က F: 15: 51 Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး။ )
တူရကီငွေကျပ်: 17.00 Konya V ကို: 18.50 (ကျန်း-Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး။ )
တူရကီငွေကျပ်: 18.30 Konya V ကို: 20.25 (Sincan က F: Sincan က F 18.51: 19.12)
တူရကီငွေကျပ်: 20.45 Konya V ကို: 22.40 (Sincan က F: Sincan က F 21.06: 21.27)
Departure နာရီကနေ KONYA:
Konya ငွေကျပ်: 07.00 တူရကီ-V ကို: 08.50 (အဘယ်သူမျှမရပ်တည်ချက် Sincan Sincan V ကို: 08.29)
Konya ငွေကျပ်: 08.30 တူရကီ-V ကို: 10.21 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 09.40: 10.00)
Konya ငွေကျပ်: 10.30 တူရကီ-V ကို: 12.15 (Sincan Sincan အဘယ်သူမျှမချိုး)
Konya ငွေကျပ်: 12.15 တူရကီ-V ကို: 14.02 (အဘယ်သူမျှမရပ်တည်ချက် Sincan Sincan V ကို: 13.41)
Konya ငွေကျပ်: 14.30 တူရကီ-V ကို: 16.21 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 15.40: 16.00)
Konya ငွေကျပ်: 16.00 တူရကီ-V ကို: 17.45 (Sincan Sincan မျှရပ်တည်ချက်)
Konya ငွေကျပ်: 18.15 တူရကီ-V ကို: 20.06 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 19.25: 19.45)
Konya ငွေကျပ်: 20.30 တူရကီ-V ကို: 22.21 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 21.40: 22.00)
တူရကီ-Konya-Karaman YHT + DMI SET clock:
Karaman V ကို 07.00: 09.15 အဆိုပါ 10.23 ခုနှစ်တွင် = Konya link ကိုမှတူရကီထံမှငွေကျပ်ပျံသန်း yhty
Karaman V ကို 09.35: 12.05 အဆိုပါ 13.14 ခုနှစ်တွင် = Konya link ကိုမှတူရကီထံမှငွေကျပ်ပျံသန်း yhty
Karaman V ကို 15.30: 17.30 အဆိုပါ 18.37 ခုနှစ်တွင် = Konya link ကိုမှတူရကီထံမှငွေကျပ်ပျံသန်း yhty
Karaman-Konya-တူရကီ YHT + DMI SET clock:
Karaman ငွေကျပ်: 10.45 Konya V ကို: 11.50 / 12.15 Konya yhty ကွန်နက်ရှင်ကနေပျံသန်း
Karaman ငွေကျပ်: 14.25 Konya V ကို: 15.31 / 16.00 Konya yhty ကွန်နက်ရှင်ကနေပျံသန်း
Karaman ငွေကျပ်: 19.00 Konya V ကို: 20.06 / 20.30 Konya yhty ကွန်နက်ရှင်ကနေပျံသန်း
တူရကီ - ESKISEHIR - အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူအကြားတူရကီအမြန်ရထား
တူရကီငွေကျပ်: 06.45-Eskisehir V ကို: 08.15 (Sincan က F: Sincan က F 07.06: 07.24)
တူရကီငွေကျပ်: 08.10-Eskisehir V ကို: 09.40 (Sincan က F: Sincan က F 08.31: 08.49)
တူရကီငွေကျပ်: 09.10-Eskisehir V ကို: 10.40 (ကျန်း-Polatlıမျှရပ်တည်ချက်)
တူရကီငွေကျပ်: 11.00-Eskisehir V ကို: 12.30 (Sincan က F: Sincan က F 11.21: 11.39)
တူရကီငွေကျပ်: 12.45-Eskisehir V ကို: 14.15 (Sincan က F: 13.06 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး)
တူရကီငွေကျပ်: 15.00-Eskisehir V ကို: 16.30 (Sincan က F: Sincan က F 15.21: 15.39)
တူရကီငွေကျပ်: 16.30-Eskisehir V ကို: 18.00 (Sincan က F: 16.51 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး)
တူရကီငွေကျပ်: 18.00-Eskisehir V ကို: 19.30 (Sincan က F: 18.21 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး)
တူရကီငွေကျပ်: 19.00-Eskisehir V ကို: 20.30 (Sincan က F: Sincan က F 19.21: 19.39)
တူရကီငွေကျပ်: 21.00-Eskisehir V ကို: 22.30 (Sincan က F: 21.21 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး)
Departure နာရီကနေ ESKISEHIR:
Eskisehir ငွေကျပ်: 06.45 တူရကီ-V ကို: 08.15 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 07.34: 07.53)
Eskisehir ငွေကျပ်: 07.45 တူရကီ-V ကို: 09.15 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 08.34: 08.53)
Eskisehir ငွေကျပ်: 09.00 တူရကီ-V ကို: 10.30 (Polatli V ကို: 09.49 မျှရပ်တည်ချက်ကျန်း)
Eskisehir ငွေကျပ်: 11.15 တူရကီ-V ကို: 12.45 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 12.05: 12.24)
Eskisehir ငွေကျပ်: 12.45 တူရကီ-V ကို: 14.15 (အဘယ်သူမျှမရပ်တည်ချက် Sincan Sincan V ကို: 13.54)
Eskisehir ငွေကျပ်: 15.00 တူရကီ-V ကို: 16.30 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 15.50: 16.09)
Eskisehir ငွေကျပ်: 16.35 တူရကီ-V ကို: 18.05 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 17.24: 17.44)
Eskisehir ငွေကျပ်: 18.15 တူရကီ-V ကို: 19.45 (အဘယ်သူမျှမရပ်တည်ချက် Sincan Sincan V ကို: 19.24)
Eskisehir ငွေကျပ်: 19.00 တူရကီ-V ကို: 20.30 (Polatli V ကို: V ကိုကျန်း 19.50: 20.09)
Eskişehir-တူရကီ K.21.00 V ကို: 22.30 (အဘယ်သူမျှမရပ်တည်ချက် Sincan Sincan V ကို: 22.09)
DISTANCE အထိ: 245 ကီလိုမီတာ
ဤအမျိုးအစားတွင် Wagon Training
Busines အတန်းအစား, စီးပွားရေးအတန်းအစား, ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုစားသောက်ဆိုင်
တူရကီတွင် SPEED ရထားလမ်းနောက်ခံ
တူရကီ Afyonkarahisar အတွက်တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း output ကိုပုံစံများကိုနု၏ပထမအဆင့်တွင်ခုတ်ဖြတ်။ ဒီဇင်ဘာလ 28 2011 ကုမ္ပဏီများမှအတွက်တင်ဒါများ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကြီးမြတ်စိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ 38 လေလံသတ်မှတ်ချက်များကုမ္ပဏီ xnumx င်ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။ စီမံကိန်းဖို့တင်ဒါနိမ့်ဆုံးလေလံအားပေးပြီးမှတစျထောငျဘီလီယံခန့် 26 660 549 သန်းပေါင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပမာဏဆိုပါကတထောင် 243 714 432 သန်းပေါင်ဆုချ။
အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) မှ 3,5 နာရီကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်တူရကီ, Izmir စီမံကိန်း 2015 အတွက်အစေခံရန်စီစဉ်ထားသည်။ တူရကီ, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစီမံကိန်းအားထဲက Afyonkarahisar 13 ၏ Izmir YHT လိုင်း Izmir ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်, 13 189 viaducts နှင့်တံတားများတည်ဆောက်ထားလိမ့်မည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည် 824 640 Izmir နှင့်တူရကီအကြားကီလိုမီတာလမ်းအကွာအဝေးကီလိုမီတာလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
တူရကီ, Izmir YHT လိုင်းနှစ်ဆလိုင်းနှင့်အနည်းဆုံး 250 kph နှင့်အညီတညျဆောကျပါလိမ့်မည်။ ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းကိုရိုက်ထည့်ရန်စီစဉ်ထား Xnumx't, တူရကီရဲ့စီးပွားရေးအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုရှိပါတယ်။ 2015 စီမံကိန်းအတွက်တထောင်ကလူအကြောင်းကို employ ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကိုလိုင်းအချိန်လောင်စာငွေစုအနေဖြင့်စီးပွားရေးအနေဖြင့်ယင်း၏အလှူငွေနှင့်နှစ်စဉ်4သန်းပေါင်တှေ့လိမျ့မညျ။ လမ်းကြောင်း Afyonkarahisar Izmir ၏အပိုင်းနောက်နှစ်တင်ဒါခံရဖို့စီစဉ်ထားသည်။ စီမံကိန်းပြီးစီးတစ်နှစ်လျှင်သန်းခရီးသည် 700 ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
TCDD-မြန်နှုန်းရထား၏ interactive မြေပုံ
de YHT ရထားလက်မှတ်တွေထဲကရောင်းချ 06 / 08 / 2013 YHT ရထားလက်မှတ်တွေ De ထဲကရောင်းချ: တူရကီ-Eskisehir, Eskisehir-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားများအကြားအပြေး (YHT) လက်မှတ်တွေကိုထုတ်ရောင်းနေကြတယ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားညွှန်ကြားမှု (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, ကအားလပ်ရက်ကာလအတွင်း 40 တထောင်ခရီးသည်ရွှေ့ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ မနက်စောစော Al-Fitr ထို့ကြောင့်မြို့ပြင်ကသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်ဖြုန်းလိုသူနိုင်ငံသားများ yht'y ကြပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းရက်အနည်းငယ် YHT လက်မှတ်တွေပြည်နယ်မီးရထား၏ညွှန်ကြားမှု (TCDD) ၏လျော့ကျအပေါ်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံပှဲခိုင်ခိုင်လုံလုံမီ, အပိုဆောင်းအချိန်အတွက်ထားကုစားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစဉ်အတွင်းအစုတခုအချိန်တွင်အပိုဆောင်းလက်မှတ်တွေတိုတောင်းတဲ့အချိန်ထဲကရောင်းချခဲ့သည်။ YHT3တထောင်ပှဲနေ့၏အကြိုလေ့လာသင်ယူခဲ့xnumx'üncအကြားခရီးသည်နေ့ကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ နေ့ ...
YHT YHT လက်မှတ်ကြိုတင်မှာများနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 25 / 08 / 2019 YHT YHT လက်မှတ်ကြိုတင်မှာများနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ: မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) နိုင်ငံသားများစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုများဟာအလွန်လေးနက်သောပြည်နယ်တို့သည် လာ. လုပ်ဆကျဆံ။ YHT ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ ကြောင်းလျှော့စျေးပြီးနောက် '' YHT လား? ဒီမှာလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီအကြားခရီးသွားအချိန်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားရဲ့ (YHT) ကိုလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကိုအတိုကောက် ... ဖြစ်ကြသည်။ YHT လက်မှတ်စျေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ တူရကီ - သင်အောက်ပါစာရင်းတွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အစ္စတန်ဘူလ် YHT '' တို့အကြားခရီးစဉ်အပေါ်လျှော့စျေးကိုပုံမှန်အတိုင်း။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအစားအဖြစ်4အပါအဝင်လက်မှတ်တွေပေါင်းစီးပွားရေး, စီးပွားရေး, စီးပွားရေးကိုပေါင်းနှင့်စီးပွားရေး, ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT မှတ်တိုင် ...
YHT2လလျှော့စျေးလက်မှတ်တွေ! 17 / 06 / 2012 Marsandiz Anadolu Boulevard တံတားကတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်လုံလုံလောက်လောက်လုံခြုံမဟုတ်ကြောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံပေါ်မှာ။ ထို့ကြောင့်တူရကီ-Eskisehir နှင့်တူရကီ-Konya YHT ခရီးစဉ်, Sincan နှင့်Eskişehirနှင့် Konya အကြား 15 ဇွန်လ-သြဂုတ်လ 15 2012 ကျန်း Sincan Sincan အတွက်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ ဤကာလအတွင်း TCDD YHT လက်မှတ်လျှော့စျေးလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးကိုအတန်းအစားအပြည့်အဝခ 25 ပေါင်, 20 ပေါင်-ပြန်လာနှင့်အတူသွား, ကျောင်းသားများ, ဆရာ, ဆရာမ, စစ်ရေးခရီးသည်အနည်းဆုံး 20 ခရီးသည်အုပ်စုများ 12 နှစ်နှင့် 60 ပေါင်ကိုရောင်းလက်မှတ်များနှင့်အတူစာနယ်ဇင်းကဒ် 16 နှင့်အတူအဟောင်းများခရီးသည်အတွက်လောလောဆယ် 12,5 ပေါင်ဟာပေါင် မသန်စွမ်းသူ (40 ရာခိုင်နှုန်းကအခက်အခဲမှုနှုန်းနှင့်အ ...
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လက်မှတ်တွေရာထူးတိုးခံရလိမျ့မညျ 21 / 11 / 2013 တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လက်မှတ်တွေရာထူးတိုးလိမ့်မည်: TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်ဟာ YHT လက်မှတ်တွေထိုသို့သောလေထုကိုပုံမှန်အတိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့ပရိုမိုးရှင်းသတ်မှတ်ထားသောမည်ဖြစ်ကြောင်း, "ယခင်ကထုတ်ယူလက်မှတ်များစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်။ လက်မှတ်စျေးနှုန်းများရက်စွဲပိုမိုနီးကပ်စွာထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းတွေပိုပြီးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ် 2014 ဇန်နဝါရီလအတွင်းက၎င်း၏စျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်ပျံသန်းမှု။ "သူကဆိုသည်။ Karaman, မီးရထားစွယ်စုံကျမ်းနှင့်မီးရထားအဘိဓာန်ရဲ့တင်ဆက်မှုအခါသမယအပေါ်တူရကီရထားဘူတာမှာသတင်းထောက်တွေကိုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Marmaray အတွက်ရေယိုစိမ့် Karaman အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်," Tube အလွန်ယဉ်ပြွန်။ တစ်ဦးရေယိုစိမ့်မှပြွန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Marmaray ပြွန်တူးဖော်တွေ့ရှိပင်လယ်ကိုအောက်ကဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင် ...
Eskişehir Konya မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
Konya, Eskisehir မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
de YHT ရထားလက်မှတ်တွေထဲကရောင်းချ
YHT2လလျှော့စျေးလက်မှတ်တွေ!
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လက်မှတ်တွေရာထူးတိုးခံရလိမျ့မညျ
အစ္စတန်ဘူလ်၏ညှနျကွားမှ YHT ရဲ့ရောင်းထွက်လက်မှတ်
တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ် YHT ဆူဒန်စျေးပေါတဲ့လက်မှတ်တွေ
ရောင်းထွက်မနက်စောစော Al-Adha လက်မှတ်တွေမှကြိုတင် YHT-ရေတွက်ရက်ပေါင်း
ပှဲ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးနေ့အဘို့ YHT လက်မှတ်တွေကိုထုတ် run ခဲ့သည်